Saddex waxyaalood oo aan ka bartay ururrada samafalka ee Soomaalida - Caasimada Online
Home Maqaalo Saddex waxyaalood oo aan ka bartay ururrada samafalka ee Soomaalida
Si aan ooga fogaanno wareer iyo isfaham la’aan, marka hore aan qeexo waxa aan ooga jeedo samafale. Samafale ama Urur samafal, waa shaqsi ama urur u istaagay ama loo yagleelay in lagu caawiyo dad, deegaan ama dan guud. waxaa soo galayo maamullada gacanta ku hayo masaajidda gaar ahaan kuwa qurbaha, hayadaha caawiyo agoonta, masaakiinta kale, iskoollada iyo malcamadaha. Waxaa ka baxayo hayadaha loo yaqaan NGO-yada oo marki horaba loo aasaasay in wax lagu helo.
Waxa la raadin karaa dad meelo kale ka shaqeeyo oo maalmaha ama waqtiyada qaar firaaqo leh, haddii loo bandhigo baahida loo qabana si fudud ku aqbali lahaa laakiin waligeedba cidi iskuma daydo. Inta jeer ee aan si ku tala gal ah u su’aalay samafalayaal baahida la qabo xisaab ma leh. Had iyo jeer jawaabtu waa isku nooc: Qarash la’aan ayaa jirto, haddi qarash la helo wax badan ayaa qabsoomi lahaa.
Arrintaan waxaa aad ugu sii dheer kooxaha hayo masaajidda oo ay ahayd inay noqdaan hormuudka daahfurnaanta iyo muraayadda laga isku eego. Nasiib darro masaajidda gaar ahaan kuwa qurbaha waxay ka mid yihiin meelaha ugu musuqa badan ee bulshada loogu adeego. Haddii aad tiraahdo sidaan wax ha laga baddalo waxaa hal hays ah “sirta masaajidka ha faafin iyo xumaanta lama sheeg sheego”.
Aasaasayaashu waxay isku koobaan dhammaan howlaha maamulka iyo go’aan gaaridda. Waxay dadka ka xiraan inay qaataan door wax ku ool ah oo ururka iyo bulshadaba anfici lahaa. Xataa haddii ay u muuqato in ururki xirmayo ma aqbalaan badbaado cid kale waddo ee inay xiraan ayay ka door bidi. Marka ugu danbaysana dhowrki aasaastay ayaa isku qabato oo mid walba isku dayaa inuu kan kale cira u fiiriyo.